Tabaruceyaal - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ku yaal ee ISD 834
Sababtoo ah COVID-19, tabaruceyaasha looma oggola dugsiyada xilligan. Waxaan rajeyneynaa inaan sida ugu dhaqsaha badan u soo dhaweyno mutadawiciinteena cajiibka ah.
Wax kastoo aad xiiseyneyso, halkan ayaa boos kaaga bannaan!
Tabaruceyaashu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah bulshadayada Pony. Kali kuma qaban karno shaqadan waxaanan ku tiirsan nahay mutadawiciin da 'kasta leh si ay nooga caawiyaan dhiirigelinta, taageerada iyo jacaylka ardaydayada!
Sannad kasta mutadawiciinta dugsiyadeennu waxay galaan kumanaan saacadood iyagoo ka caawinaya fasalladayada, ka caawinta safarada dibadda iyo taageeridda macallimiinteenna. Tabaruceyaashu waxay la akhriyaan ardayda, armaajooyinka keydka maktabadda, la ciyaaraan qashinka, la wadaagaan la-talinta xirfadaha iyo abaabulo dhacdooyin gaar ah. Wax kastoo xirfad ama xiiso ah, shaki kuma jiro inaan shaqo kuu hayno!
Fadlan la xiriir mid ka mid ah maamulayaashayada dhismaha ama hoggaamiyeyaasha barnaamijka haddii aad xiiseyneyso tabarucidda dugsiyadeena.
Dhammaan mutadawiciinta degmadu waa inay dhammaystiraan baaritaanka asalka tabaruca inta aysan carruurta la shaqeynin.
Noqo Wadaage Jidka
La wadaag ardayda waxa aad taqaano!
Jidka loo yaqaan 'Waterwater Pathways' waa qaab lagu horumariyo shaqaalaha mustaqbalka. Waxay ardayda u siisaa dariiqooyin ay ku baadhaan cidda ay yihiin iyo waxa ay xirfad ku doonayaan. Sidoo kale waa dariiq loo maro loo shaqeeyeyaasha wajahaya foosha iyo xirfadaha oo ay ku siiyaan khibrad iyo waxqabadyo waxbarasho khibrad jiilka dambe ee shaqaalaha.
Ma xiisaynaysaa inaad nolosha wax ka beddesho? Waxaan raadineynaa inaan dhisno xitaa iskaashi dheeri ah oo udhaxeeya ardaydeena, ganacsiyada maxalliga ah iyo khubarada bulshada sidaada oo kale ah. Nagu soo biir!
Noqo Wadaage Hadda
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan iskaashiga waddada